Ciise wuxuu yidhi: Anigu waxaan ahay runta, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Weligaa miyaad sharraxday qof aad taqaanid kuna dhibtooday inaad hesho ereyada saxda ah? Horay ayey iigu dhacday aniga oo aan ogsoonahay in kuwa kale sidaas oo kale dareemeen. Waxaan dhamaanteen leenahay asxaab ama is yaqaannaan oo sharaxdooda ay adag tahay in ereyada la dhigo. Ciise wax dhib ah kuma lahayn taas. Had iyo jeer wuu cadahay, xitaa markay tahay inuu ka jawaabo su'aasha "yaad tahay?" Waxaan si gaar ah u jeclahay hal meel oo uu ku leeyahay Injiilka Yooxanaa: “Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha; Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee (Yooxanaa 14,6).
Qoraalkani wuxuu Ciise ka saarayaa dhammaan hoggaamiyeyaasha diimaha kale. Hogaamiyaasha kale waxay dhaheen "waxaan raadsanayaa runta" ama "waxaan barayaa runta" ama "waxaan muujinayaa runta" ama "waxaan ahay nabi run ah". Ciise ayaa yimid oo yidhi, Anigu waxaan ahay runta. Runtu ma aha mabda 'ama fikrad qaldan. Runtu waa qof anna waxaan ahay qofkaas.
Halkan waxaan ku nimid qodob muhiim ah. Sheegashada sidan oo kale ah ayaa nagu qasbeysa inaan go'aan qaadno: haddii aan rumeysan nahay Ciise, waa inaan rumeysanno wax walba oo uu yiraahdo. Haddii aanaan isaga rumaysan isaga, markaa wax waliba waa wax aan qiimo lahayn, markaa annaguna ma rumaysanno waxyaabo kale oo uu sheegay. Ma jiro hoos u dhac. Ama ciise waa runta shaqsi ahaanta wuxuuna ku hadlaa runta, ama labaduba waa khaldan yihiin.
Taasi waa wax la yaab leh: ogaanshaha inuu isagu yahay runta. Ogaanshaha runta waxaa loola jeedaa waxaan si buuxda u aamini karaa wuxuu dhahayo: "Waxaad ogaan doontaa runta runtuna way idin xorayn doontaa" (Yooxanaa 8,32:5,1). Bawlos wuxuu ina xusuusinayaa tan oo ah Waraaqda ku socota Galatiya: “Masiixu wuxuu inaga xoreeyay xorriyadda!” (Gal. XNUMX).
Ogaanshaha Masiixu micnaheedu waa ogaanshaha in runtu ku jirto isaga oo aan xor nahay. Xor ka ahaada xukunka dembiyadeena oo xor u ah inaad dadka kale ku jeclaatid isla jacaylka xagjirnimada ah ee uu u muujiyey ninka ay wadaagaan maalin kasta noloshiisa halkan. Waxaan xor u nahay kalsoonida xukunkiisa qaaliga ah waqtiyada oo dhan iyo dhammaan abuurista. Sababta oo ah waxaan ognahay runta, waanu ku kalsoonaan karnaa oo waxaan ugu noolaan karnaa sida Masiixa oo kale.